Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.3.2.7 xasaasi
Shirkadaha caymiska caafimaadka u Caddaynay macluumaad ku saabsan daryeelka caafimaadka helay by macaamiishooda. Macluumaadkan waxaa loo isticmaali karo cilmi muhiim ah oo ku saabsan caafimaadka, laakiin haddii ay dadweynaha noqday waxay keeni kartaa inay dhibaato xagga dareenka ah (tusaale ahaan, ceeb) iyo dhibaato dhaqaale (tusaale ahaan, luminta shaqada). Far ka kala ilaha xogta weyn, dad badan waxay leeyihiin macluumaad waa xasaasi ah. Dabeecadda xasaasi macluumaadkan waa qayb ka mid ah sababta in ilaha xogta weyn yihiin inta badan geli karin (kor lagu sharaxay).
Hal hab in cilmi-isku dayaan in ay xaaladdan ka qabtaan waa in ay adkayd de-aqoonsado in ay leeyihiin macluumaadka xasaasiga ah. Laakiin, sida aan ku tusi doonaa si faahfaahsan cutubka 6 (Ethics) habkan si dhab ah ku koobnayn siyaabo in si ballaaran aan ka mahadnaqayo by labada saynisyahano bulshada iyo xogta saynisyahano.
Gebogebadii, ilaha xogta weyn ee maanta (iyo berri) guud ahaan waxay leeyihiin toban sifooyinka. Qaar badan oo ka mid ah guryaha-weyn oo wanaagsan, had iyo jeer-on, iyo xaqiiqda ah nonreactive-yimaadaan shirkadaha da'da digital iyo dawladaha ay awoodaan in ay soo ururiyaan xogta ugu baaxadda aan suurto gal ahayd hore. Oo, qaar badan oo xun guryaha-dhamaystirnayn, geli karin, oo aan wakiil, hor timi, algorithmically sharaf jabi doonaan, geli karin, wasakh ah, oo xasaasi iman-ka xaqiiqda ah in macluumaadka aan la soo ururiyey by cilmi cilmibaadhayaal. Fahamka sifooyinka kuwanu waa tallaabo lagama maarmaan ah marka hore in ay waxbarashada ka xogta weyn. Oo, hadda waxaannu u jeesanaynaa dadka cilmi xeeladaha aan isticmaali kartaa macluumaadka this.